Ungawakhetha kanjani amabhuzu afanele wesitayela sakho | Amadoda aSitayela
Amabhuzu ayisiqeshana esiyinhloko phakathi nezinyanga ezibandayo, ngoba bayasifudumeza ngenkathi besithinta ubusika ekubukekeni kwethu.
Kodwa-ke, sazi kanjani ukuthi sitshala imali kumabhangqa amahle kakhulu kithi? Lapha sikulethela izitayela eziyinhloko ze- amabhuzu amadoda, kuhambisana nokubukeka kokhiye, ukukusiza ukhethe.
1 Amabhuzu e-Chelsea
2 Amabhuzu asogwadule
3 Amabhuthi eBrogue
4 Amabhuzu okusebenza
Amabhuzu e-Chelsea avame ukuhlotshaniswa nokubukeka okukhuthazwe ngamatshe (U-Hedi Slimane ungomunye wabaphehli abaphambili), kodwa okunye okubalukisayo ukuthi banemisebenzi ehlukahlukene. Ngaphakathi kokungajwayelekile, basebenza bobabili ekubukekeni okuya kakhulu ohlangothini oluhlakaniphile kanye nalabo abanikeza isithombe esikhululeke kakhudlwana (bona ukuthi babukeka kahle kanjani ngama-sweatshirt amakhulu), inqobo nje uma amabhulukwe esikiwe. Ngakho-ke, uma ekhabetheni lakho kukhona iningi lazo, lawa amabhuzu okufanele utshale kuwo imali yakho.
Ungasho ukuthi ayalingana namabhuthi asolwandle. Uma isitayela sakho sincike kakhulu ku-preppy Noma ngqo, uzibheka u-posh, ukungeza amabhuzu oGwadule ku-rack rack yakho kuyisinqumo esihle kakhulu. Zihlanganise ne-jean eqondile nama-chinos. Phezulu, khulisa isimilo sakhe esidlondlobele ngamajwethi alukiwe ngaphezulu kwamahembe, amajakhethi ayizifanekiselo namabhantshi ajwayelekile (njengaleyo egqokwa ngumlingisi uTom Hiddleston).
Uma unesitayela esidala, lolu hlobo lwezicathulo luzoba ngomunye wabalingani bakho abahamba phambili uma kukhulunywa ngokuhlanganisa ukubukeka kwakho. Ukugqoka izinyawo zamadoda selokhu kuqale ikhulu lama-XNUMX – noma nangaphezulu--, banikela leso sithombe esibucayi esibenza bangangqubuzani nakancane ngezingubo zasesitarini nezesemthethweni ngokujwayelekile. Uhlobo lwebhuthi oludingayo uma amasudi evelele ekhabethe lakho nezingubo ezenziwe ukukalwa.
Uhlobo lweTimberland noma i-moccasin luqine kakhulu, ngokuthile ababhabhadiswa ngakho njengezicathulo zomsebenzi. Ilungele amadoda anesitayela sabesilisa kakhulu, ngomqondo omdala kakhulu wegama. Uma ikhabethe lakho lisebenza, kulula futhi ukunethezeka kunakho konke okunye (amajakhethi ama-denim, amahembe we-flannel, izikibha eziyisisekelo ...), azikho izicathulo ezingcono kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Thola ukuthi hlobo luni lwamabhuthi alungele wena